साइप्रस - अविश्वसनीय विकसित पर्यटक पूर्वाधार एक देश। प्रकृति अविश्वसनीय सौन्दर्य र माइल लामो समुद्री तट यस द्वीप राष्ट्र endowed छ। र साइप्रस हरेक वर्ष तपाईं आफ्नो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आकर्षण पर्खिरहेका छन् किनभने यहाँ, छुट्टी घुमफिर प्रशंसक आकर्षित गर्छ। त्यहाँ सधैं कुरा हो, र नम्र जलवायु तिमी सूर्य आनन्द उठाउँछन् गर्न पनि जाडो महिनामा अनुमति दिन्छ यहाँ हेर्नुहोस्।
जहाँ रहन को विकल्प विचार, पर्यटक अक्सर Astreas बीच होटल3मा रहन * विचार गर्न लगाइदिए छन्। वास्तवमा Protaras देश को सबै भन्दा लोकप्रिय रिसोर्टमा सहर मध्ये एक मानिन्छ, र मनोरञ्जन rife छ। तर को पाठ्यक्रम, पहिलो उपयोगी चयन होटल बारेमा सबै उपलब्ध जानकारी जाँच्न र अन्य यात्री को राय सोध्न।
जहाँ पर्यटकहरु बस्न हुनेछ? स्थान
निस्सन्देह, सुरू गर्न कहाँ यसलाई स्थित छ होटल जटिल Astreas बीच Apts3* पत्ता लगाउन छ। साइप्रस, Protaras, र थप विशेष एक समुद्र तट मा शान्त रिसोर्ट क्षेत्र - यो जहाँ अवकाश यात्री यस होटल बन्द गर्न छनोट छ। निस्सन्देह, स्थान अनुकूल गर्न सकिँदैन। पहिले, बस 50 मिटर देश मा सबै भन्दा राम्रो तटों को छ। दोश्रो, थप सक्रिय गर्न, आकर्षण र शहर को केन्द्र को मनोरञ्जन पूर्ण केही मिनेटमा पुग्न सकिन्छ। नजिकैको सबै उमेरका बच्चाहरुका लागि क्याफे र साना पसलहरूमा प्रशस्त, साथै मनोरञ्जन केन्द्र छन्।
नजिकैको कम लोकप्रिय छैन रिसोर्ट्स धेरै छन्, किनभने मार्फत सार्वजनिक परिवहन सजिलो र छिमेकी मार्फत यात्रा गर्न सस्तो छ - सडक मार्फत एक बस स्टप छ। उदाहरणका लागि, Ayia नापा को शहर गर्न दूरी मात्र 10 किमी छ। 8 किलोमिटर मा दूर Paralimni को शहर छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय लारनाका हवाई अड्डा 50 किलोमिटर टाढा छ। सडक 45 मिनेट भन्दा कुनै थप हुनेछ - खैर, पर्यटन पहिले नै सहज स्थानान्तरण, कदम चिन्ता छैन यति समावेश गर्नुहोस्।
होटल Astreas बीच होटल Apartments3* (साइप्रस, Protaras): को पूर्वाधार जानकारी
यो होटल 1992 मा खोलिएको थियो र काम को दशकमा लागि साँच्चै राम्रो प्रतिष्ठा किन्न थियो। यो होटल Astreas बीच होटल Apartments3* बारेमा पनि एक नकारात्मक समीक्षा पाउन गाह्रो छ। साइप्रस वास्तवमा यसको उच्च गुणवत्ता सेवा चिनिन्छ।
होटल एउटा ठूलो बहु-मंजिल्ला भवन हुन्छन्। इलाका सानो (लगभग 9400 वर्ग मीटर को क्षेत्र) छ, तर यार्ड सुसज्जित छ - त्यहाँ terraces र खेल को मैदानों, र एउटा सानो तलैया छन्। खैर, छैन त लामो अघि मर्मत बाहिर यहाँ, त्यसैले आज पर्यटकहरु परिसर ताजापन र सफाई, साथै आधुनिक उपकरण को उपलब्धता आनन्द गरियो।
के आवास प्रस्ताव पर्यटकहरु? विवरण कोठा
तपाईं एक होटल जटिल Astreas बीच3* (Protaras) प्रस्ताव जीवित गुणस्तर र सान्त्वना को स्तर के हो? आफ्नो समीक्षा यस होटल बारेमा बोल्न मा सकारात्मक छ। सुरु लागि यो एउटा 43 कोठा हो भन्नुभयो हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा सानो, आरामदायक स्टूडियो 1-2 व्यक्ति समायोजित गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, यो कोठा को सबै भन्दा एउटा छुट्टै बेडरूम, रहन कोठा र आफ्नै भान्सा समावेश विशाल अपार्टमेन्ट, प्रस्तुत।
कोठा, सरल, अझै स्वादिष्ट संग सुसज्जित छन्। ठूलो ओछ्यानमा साथै, त्यहाँ कुर्सी, वार्डरोब, बिस्तर तालिका र अपार्टमेन्ट पनि दुई सोफे, भान्सा फर्नीचर, भोजन तालिका, धेरै सुविधाजनक छ जो छन्। निस्सन्देह, पर्यटकहरु धेरै सान्त्वना उपकरण, वातानुकूलन, टेलिभिजन (त्यहाँ धेरै रूसी च्यानलहरू छन्), टेलिफोन र सुरक्षित सहित आवश्यक प्रदान। आफ्नै भान्सा पनि प्लस मानिन्छ - त्यहाँ खाना पकाउन र खाने, एउटा सानो रेफ्रिजरेटर, चुलो, सिंक, माइक्रोवेब ओभन र बिजुली केतली लागि बर्तन सबै प्रकारका छन्।
बाथरूम शुद्धता र सफेदी संग चमकता। यहाँ तपाईँले कुनै पनि समयमा नुहाउनु लाग्न सक्छ। सफा तौलिया, पाठ्यक्रम, त्यहाँ छन् - तिनीहरूले हो, साथै ओछ्यान तन्ना रूपमा, परिवर्तन हरेक दुई दिन। बाटो गरेर, नौकरानियां कोठा, आफ्नो काम को सफाई कायम, पाहुनाहरूको को कुनै पनि उजुरी छैन।
शक्ति: क्षेत्र मा खान यो सम्भव छ?
यात्रा योजना आवश्यक पोषण को मुद्दा समावेश गर्नुपर्छ। होटल Astreas बीच होटल Apts3के गर्छ *? Protaras - शहर जहाँ "सबै समावेशी" को लोकप्रिय योजना। र यो होटल तपाईं एक स्थानीय रेस्टुरेन्ट मा पूर्ण भोजन भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, एक अपवाद छैन। मेनु सबै होटल चेक-मा डिग्री बिना पर्याप्त छ मा खाना सधैं ताजा खाना छ, राम्रो छ। तपाईं पनि समुद्री खाने गर्न सक्नुहुन्छ, र स्थानीय पेस्ट्री तुरुन्त मनपर्ने व्यवहार बच्चाहरु र वयस्क बन्नेछ।
पूर्ण होटल आफैलाई बाँध छैन ताकि अर्कोतर्फ, तपाईं, भुक्तानी गर्न सक्छन्, उदाहरणका लागि, केवल नास्ता। कुनै पनि मामला मा, कोठा को सबै भन्दा यसको आफ्नै भान्सा, तपाईं (खाना पर्याप्त पसलहरूमा नजिकै) कोठा मा खाने हुन सक्छ तपाईं चाहिएमा त छ।
समुद्र तट, किनारमा मा सान्त्वना र मनोरञ्जन गर्न दूरी
पानी गतिविधिहरु को मामला मा त्यो * प्रस्ताव Astreas बीच होटल 3? साइप्रस, Protaras, विशेष, आफ्नो सुनको किनारा लागि प्रसिद्ध छ। नेभाराको खाडी - होटल द्वीप मा सबै भन्दा सुन्दर समुद्री तट को एक देखि बस 50 मिटर। यो एक सार्वजनिक साइट, तर व्यापक समुद्र तट रेखा हो, र पर्यटक एक प्रशस्त साथ यहाँ मनोरञ्जनको लागि, तर पनि खेल गतिविधिहरु लागि मात्र होइन पर्याप्त ठाउँ छ।
तपाईं दृढ गद्दे र छाते संग कुर्सियों भाडामा गर्न सक्छन् - यो मात्र केही यूरो लागत। खैर, बोनस रूपमा 24 घन्टा को लागि समुद्र तट मा इन्टरनेट पहुँच अधिकार प्राप्त। समुद्र तट सफा छ र बालुवा राम्रो र नरम छ। पानी अविश्वसनीय स्पष्ट र न्यानो छ - धेरै पर्यटकहरु स्थानीय Fauna को पानी आकर्षण र विविधता अध्ययन, एक मास्क लगाएको पौडी खेल्न रुचाउँछु।
को पाठ्यक्रम, तपाईं समय थप सक्रिय हुन सक्छ खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने - सर्फिङ र स्कुबा डाइभिङ मा आफ्नो हात प्रयास बोटिङ वा पानी स्किइङ, प्यारासेलिङ, जानुहोस्। किनारमा मा भलिबल र फुटबल लागि पनि एक खेल मैदान छ।
थप सेवाहरू प्रदान गर्दछ
होटल को ग्राहकको बन्ने, तपाईं निश्चित सेवा एक निश्चित स्तर आशा गर्न सक्छौं। विशेष मा, तपाईं एक कार वा साइकल लेना टाढा हेर्न आवश्यक छैन - तपाईं साइट मा सही यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। को स्वागत मा, धेरै पाहुनाहरूलाई पनि मुद्रा विनिमय। एक निजी कार पार्क अतिथि मुक्त छन् जो पनि छ।
होटल vayfay छ, तर यसको प्रयोगको लागि भुक्तानी गर्न छ। यो धेरै सुविधाजनक छैन, तर दुर्भाग्य, यस्तो ढाँचा साइप्रस को लगभग सबै होटल अवलोकन गर्न सकिन्छ। खैर, कम्प्युटर कुना मा, तपाईं एक ल्याप्टप कम्प्यूटर, कार्यालय उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, साथै एक फ्याक्स पठाउन।
होटल मा आराम: आशा के?
यहाँ केही हल्ला प्रदर्शन र मनोरञ्जन - होटल मुख्यतया एक शान्त छुट्टी आवश्यक मानिसहरूलाई उद्देश्य छ। यार्ड मा सूर्य loungers र आसपास छाते एक स्विमिंग पूल छ - यहाँ केही अतिथिहरूको sunbathe र आराम छन्।
त्यहाँ जहाँ तपाईं पूर्ण आराम प्रत्याभूति गर्दै एक सना र धेरै मालिश कोठा छ। र तपाईंलाई साथीहरूसँग बिलियर्ड्स प्ले एक साँझ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। होटल यसको आफ्नै र एक डेस्क छ।
त्यहाँ बच्चाहरु संग जीवित लागि कुनै पनि अवस्थामा छन्?
थुप्रै आमाबाबुले पर्यटकहरु रोचक होटल मा बच्चा लिन वा छैन को प्रश्न छ। वास्तवमा, होटल परिवारको लागि उपयुक्त छ। को विशाल घर सजिलै 4-5 मान्छे को परिवार बसोबास गर्छन्। रेस्टुरेन्ट सधैं आफ्नो बच्चा फिट हुनेछ कि एक सरल र स्वस्थ खाना हो। र Waiters सधैं सानो पर्यटकहरूलाई एक उच्च कुर्सी प्रस्ताव छन्। आवश्यक छ भने, बच्चा नर्स को पर्यवेक्षण अन्तर्गत केही घण्टा बाँकी गर्न सकिन्छ।
केही विशेष छोराछोरीको मनोरञ्जन लागि जाँदा, तिनीहरूले साइट मा, दुर्भाग्य कुनै छन्। यद्यपि, यो मान्छे समुद्र तट मा एक ठूलो समय र शहर एक ठूलो पानी पार्क गर्न मनोरञ्जन प्रशस्त, खेल केन्द्र देखि छ।
Astreas बीच होटल3* (Protaras): अतिथि समीक्षा र
तपाईं पूर्व अतिथि छोड्न भनेर समीक्षा पढ्नुहोस् छैन भने आगामी छुट्टी को तस्वीर छैन सम्पन्न भयो। आफ्नै Astreas बीच होटल3* मा बाँया छाप के हुन्? Protaras - एक सुन्दर शहर, र तपाईं बीच मा क्षेत्र आराम र अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो होटल तपाईं पूर्णतया अनुरूप हुनेछ। इलाका सानो, तर सुन्दर छ। कोठा संकोच सुसज्जित छन्, तर राम्रो क्रममा फर्नीचर र उपकरण, स्वच्छता स्तर पालन गर्दै छन्, र राम्रो ध्वनि इन्सुलेशन - कोठा मा उज्ज्वल भावना को एक व्यस्त दिन पछि राम्रो बाँकी हुन सक्छ।
कर्मचारीहरु, खैर, लगभग सबैको मा रूसी, जो धेरै सुविधाजनक छ बोल्छ - भाषा बाधा यहाँ अवस्थित छैन। होटल र रूसी-बोल्ने मा पर्यटकहरु को थोक। रेस्टुरेन्ट मा खाना राम्रो छ, र कफी धेरै दोकान, त्यसैले खाद्य समस्या छैन। किनभने यहाँ अक्सर पर्यटकहरु छिमेकी सहर बाट पनि आउन ठूलो लाभ, सुन्दर समुद्र तट नजिक गर्न सकिँदैन। छोटो मा, यात्री Astreas बीच होटल3* गर्न सल्लाह छन्। हरेक स्वाद को लागि मनोरञ्जन धेरै छन् Protaras, छुट्टी को लगभग कुनै पनि प्रकार को लागि उपयुक्त छ।
"स्लाव भाषाहरु प्लाजा", मोन्टेनेग्रो: विवरण, फोटो र समीक्षा
होटल सागर बतास गाउँ3* (गोवा, भारत): विवरण र फोटो
"आकर्षक" (होटल, Tyumen): ठेगाना, समीक्षा, फोटो
Fishtail कसरी चुल्ठो गर्न: fashionistas लागि व्यापार को ट्रिक्स
हप शंकु। समग्र फल को औषधीय गुण
अयोग्य व्यक्ति। पर्याप्त व्यवहार। अयोग्य प्रतिक्रिया